July 2020 - Nalonetardiary
အသက်ဘေးကြုံလျှင်၊ မတရား စွတ်စွဲခံရလျှင်၊ ဋ္ဌာနမပြောင်းလိုလျှင် အမြစ်အညွန့်မတွန့်စေရ ယတြာ အမြစ်အညွန့်မတွန့်စေရ တင်လှူရန် အမြစ်အညွန့် မတွန့််စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်း များသည် အကာအကွယ်စွမ်းအား တည်မြဲမှုစွမ်းအား၊ အားကောင်းသည်ဖြစ်၍… ၁။ အသက်ဘေးအန္ဒရယ်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရသော အချိန်များ.. ၂။ မတရား စွတ်စွဲ လုပ်ကြံခံရခြင်းများကြုံနေတဲ့ အချိန်များ ၃။ ရောဂါဝေဒနာ ကြီးမားပြင်းထန် ခံစားနေရသည့် အချိန်များ.. ၄။ အန္ဒရာယ်များသည့် အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေချိန်များ.. ၅။ လက်ရှိနေထိုင်ရာ အိုးအိမ် ၊ လုပ်ငန်း ၊ ဋ္ဌာနတို့မှ မပြောင်းမရွှေ့လိုပဲ တည်မြဲလိုသည့် အချိန်များ.. ၆။ ရန် ၊ ဘုမ္မိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမ္မိကြီးကဲ့သို့ ဂြိုဟ်ဆိုး … Read more
Categories Horoscropes Tags အမြစ်အညွန့်
ခရိုင် ၅၄ခုအား မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် ၃၁.၇.၂၀၂၀ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုသည်ယနေ့(၃၁.၇.၂၀၂၀)မှစတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသများဖြစ်သည့် နောင်ခိုင်ခရိုင်၊လေ့ခရိုင်၊နွန်ဘူလန်ဖုန်ခရိုင်၊၊ စကဲအိုခရိုင်၊ စူခိုနခွန်ခရိုင်၊ဥဒွန်ဌာနီခရိုင်၊လွယ်အစ်ခရိုင်၊မဟာစာရခမ်ခရိုင်၊ဥဘွန်ရခ်ျဌာနီခရိုင်၊ ဘူရိရမ်ခရိုင်၊လယောင်ခရိုင်၊ချွန်ဘူရီခရိုင်၊တရတ်ခရိုင်တို့အားဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ှသြဂုတ်( ၁)ရက်နေ့မှ (၄)ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်းပိုင်ဒေသများဖြစ်သည့် ရနောင်းခရိုင်နှင့် ဖန်ငခရိုင်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သိရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ဖော်ပြပါ ဒေသများတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများသတိပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ဘန်ကောက် အလုပ်သမားဟစ်တိုင် Zawgyi ခ႐ိုင္ ၅၄ခုအား မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ၃၁.၇.၂၀၂၀ အဆိုပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းတစ္ခုသည္ယေန႔(၃၁.၇.၂၀၂၀)မွစတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာင္ခိုင္ခ႐ိုင္၊ေလ့ခ႐ိုင္၊ႏြန္ဘူလန္ဖုန္ခ႐ိုင္၊၊ စကဲအိုခ႐ိုင္၊ စူခိုနခြန္ခ႐ိုင္၊ဥဒြန္ဌာနီခ႐ိုင္၊လြယ္အစ္ခ႐ိုင္၊မဟာစာရခမ္ခ႐ိုင္၊ဥဘြန္ရခ္်ဌာနီခ႐ိုင္၊ ဘူရိရမ္ခ႐ိုင္၊လေယာင္ခ႐ိုင္၊ခြၽန္ဘူရီခ႐ိုင္၊တရတ္ခ႐ိုင္တို႔အားဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ွၾသဂုတ္( ၁)ရက္ေန႔မွ (၄)ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္းပိုင္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရေနာင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ဖန္ငခ႐ိုင္သို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သိရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသမ်ားတြင္ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားသတိျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ … Read more
Categories International News, Local News Tags မုန်တိုင်းသတိပေးချက်
ရင္ကိုေအးၿပီး ခံတြင္းရွင္းတဲ့ ဆန္ခ်ိဳေအးလုပ္နည္း
ရင်ထဲကိုအေး ဆန်ချိုအေးအေးလေး ခံတွင်းရှင်းလို့ ထမင်းစားပြီး သောက်ကြစို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကောက်ညင်းဆန် နို့ဆီဘူး -၂ဘူး ဆန်ချိုဆေးမှုန့် – ၁ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း) ( ရန်ကုန်မှာဆိုရင် သံစျေးမှာ မေးဝယ်လို့ ရပါတယ် ) သကြား -၂၅ကျပ်သား ပြုလုပ်နည်း ပထမ ကောက်ညင်းကို ရေစိမ်ထားပြီးပေါင်းပါ။ ခပ်တင်းတင်းအနေထားပေါင်းရပါမယ်။ပေါင်းပြီးအအေးခံကာ ရေဆေးချပါ။ သန့်ရှင်းသော ဆီကင်းသော အဝကျယ်ပုံး သို့ ဘူးတခုတွင်ထည့်ပါ ။ ကောက်ညင်းနှစ်ဘူးလျှင်ရေ ၅လီတာခန့်ထည့်ပါ။ ဆန်ချိုဆေးကိုပိတ်စပါးတခုဖြင့်ထုတ်ပြီး ရေစ်ိမ်ထားသောကောက်ညင်းဆန်အတွင်းထည့်ကာ ဆေးအရည်ပျော်ရန်အနည်းငယ်ခြေပေးပြီးအထက်အောက်မွေပါ။ အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီးပူနွေးသောနေရာတွင်ဖောက်ထားပါ ။ ရာသီဥတု ပူနွေးပါက ၁ရက်ခွဲခန့်တွင် ရပါပြီ ။ဖောက်ထားသောကောက်ညင်းဆန်ဖတ်များေ၇ပေါ်ပေါလောပေါ်လာပါကဆန်ချိုအေးပြုလုပ်၇န်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ကောက်ညင်းဆန်ဖတ်လေးတွေ ဖျော်စပ်တဲ့အခါ ပိုပီး ပေါလောပေါ်စေချင်ရင်တော့ သကြားရည်နဲ့ အဆိုပါ ကောက်ညှင်းဆန်ဖတ်ကိုရောပီး ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်၊ အနွေးခလုတ်ကို … Read more
Categories Food Tags ဆန်ချိုအေ
ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္မည့္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ေက်ာင္းေတြမွာ လုံးဝမကပ္ပါ
သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့မနက်(၀၀: ၃၀)နာရီခွဲမှာ ထုတ်ပြန်မည့် ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ကျောင်းတွေ မှာ လုံးဝ မကပ်ပါ။ အောင်စာရင်း ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရပါမယ် …။ (၁၀) တန်းအောင်စာရင်းကို ကျောင်းတွေမှာ လုံးဝ မကပ်ပါဘူး၊ လိုင်း‌ပေါ် ကနေ ကြည့်ရပါမယ် ၊ အောင်စာရင်း ကြည့်ချင် ရင် ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပေးပါ (www. myanmarexam. org) (၁၀) တန်းအောင်စာရင်းတွေ ကို သြဂုတ်လ( ၉ )ရက်နေ့မနက်( ၀၀: ၃၀ )နာရီခွဲမှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေဆီ ညွှန်ကြားစာ ပေးပို့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် …။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ သြဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့မှာ www. myanmarexam. org ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ … Read more
Categories Local News Tags ဆယ်တန်းအောင်စာရင်
မီးသတ္ကားနဲ႕ အတိုက္ခံရလို႔ ရခဲ့တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးကို မီးသတ္ဌာနကို ၁၀သိန္း လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ကားပိုင္ရွင္
မီးသတ်ကား က မီးနီဖြတ်မောင်းလာပြီး လမ်းမှန်က အိမ်စီးကား ကို တိုက်မိခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နစ်နာကြေး အဖြစ် သိန်း ၃၀ပေးခဲ့ရာမှာ နစ်နာသူ အိမ်စီးကားပိုင်ရှင်က ၁၀သိန်းကို ပြန်လည်လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပါ။မီ းလောင်ပြင်လာတဲ့ မီးသတ်ကားနဲ့ အိမ်စီး ကားတိုက်မှုက ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အတွင်းဖြစ်ပွား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မီးသတ်စခန်းက လျော်ကြေးအဖြစ် ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ ပေးခဲ့သော်လည်း နစ်နာသူ အိမ်စီးကားပိုင်ရှင်ကလျော်ကြေးငွေထဲကနေ ၁၀သိန်း ပြန်လည် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် “ကျွန်တော့် ကားဒရိုင်ဘာက ရွှေပြည်သာကွေ့ မီးပွိုင့်မှာ မီးစိမ်းလို့အကွေ့ မီးသတ်ကားက မီးနီကို ဖြတ်အမောင်း မှာ တိုက်မိ တာပါ။ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကားပျက်စီးမှုကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့ ဘော်ဒီဆရာက ၃၅သိန်းကျမယ်လို့ ပြောလို့ အဲ့လောက်ပဲ ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆို ခဲ့ပြီး သူတို့ဘက်က သိန်း … Read more
Categories Local News Tags မီးသတ်ကား
သြားကိုက္ျခင္းေ၀ဒနာကို ( ၁ ) မိနစ္ အတြင္း သက္သာေစမယ့္ အိမ္တြင္းနည္းလမ္း
သွားကိုက်ခြင်းကို ( ၁ ) မိနစ် အတွင်း သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ (၁)ဆားပြုတ်ရည် ဆားသည် သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး သွားကိုက်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်သော နည်းတစ်မျိူးဖြစ်ပါတယ်။ ဆား စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်ကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သွားကိုက်ခြင်းကိုသက်သာစေပြီး သွားဖုံးယောင်ခြင်းနဲ့ လည်ပင်းနာခြင်းကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။ (၂)ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ် သွားချေးများကို ပြောင်စေစေပြီး သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။ ၃%ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ် ၅စက်ခန့်ကို ရေ ၅၀ ml တွင်ရောပါ။ထို့နောက် ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (၃)လေးညင်းဆီ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် လေးညင်းကို သွားကိုက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လေးညင်းမှာ eugenol ဆိုတဲ့ သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိူး ပါ၀င်တဲ့အတွက် သွားကိုက်စေသော ပိုးများကို သေစေပါတယ်။ လေးညင်းပွင့်အနည်းငယ်ကို ၀ါးစားခြင်း၊လေးညင်းမှုန့်ကို သွားပိုးပေါက်ပေါ်တွင် အုံပေးခြင်း၊လေးညင်းဆီကိုအစက်ချပေးခြင်း … Read more
Categories Hearth Tags သွားကိုက်ခြင်း
မြို့ရှောင်လမ်းဘေး အိမ်၊ခြံ ၊မြေ ဝယ်လိုသူများအတွက် သတိပေးချက် နောင်တွင် မြို့ရှောင်လမ်းဖောက်ပြီဆိုလျှင် မြို့ရှောင်လမ်းတလျှောက် ခြံစည်းရိုးခတ်မည်ဖြစ်၍မြို့ရှောင်လမ်းဘေး ဝယ်သူများ ငွေကြေးဆုံးရှုံးသွားမည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကြိုတင်သတိပေးထား နေပြည်တော်၊ဇူလိုင် ၂၉ ရက် မြို့ရှောင်လမ်းသစ်ဘေး ဈေးဆိုင်၊ဟိုတယ်၊လူနေအိမ်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို နောင်တွင် တိုင်း၊ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ က ခွင့်မပြုပေးရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကမှတဆင့် ယနေ့တွင် တင်ပြလိုက်သည်။ နောင်တွင် မြို့ရှောင်လမ်းဖောက်ပါက ခြံစည်းရိုးပါ တစ်ပါတည်း ခတ်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြို့ရှောင်လမ်းဘေးတွင် ဝယ်သူများအနေဖြင့် ငွေကြေးများသာ ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည့်အကြောင်းပါ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။ “ဒီနေရာမှာ နာယကကြီးကတစ်ဆင့် ကျနော်တင်ပြလိုတာကတော့ မြို့ရှောင်လမ်းတွေဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ စက်ဘီးတွေ ဆိုက္ကားတွေ လူစီးယာဉ်တွေ စသည်ဖြင့် ဒီနေရာမှာ ယာဉ် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင်ရယ် နောက် သွားလိုရာခရီးကို … Read more
Categories Local News Tags မြို့ရှောင်လမ်းဘေ
အစောက သိခဲ့ရင် နှစ်ခွဖြစ်လို့ဆိုပြီး ညှပ်ချခဲ့ရတဲ့ ဆံပင် တစ်ထွာကျော်ကို နှမျောနေရတော့မှာ မဟုတ်ဘူ
July 30, 2020 by Nalonetar Diary
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောအကျဆုံးက ဆံပင်ပဲ” ဆေးနည်းတစ်ခု လုပ်ကြည့်တာ ၂ ကြိမ်တည်းနဲ့ သိသာတယ်။ အစောက သိခဲ့ရင် နှစ်ခွဖြစ်လို့ဆိုပြီး ညှပ်ချခဲ့ရတဲ့ ဆံပင် တစ်ထွာကျော်ကို နှမျောနေရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ၂ ချပ်လောက်ရှာ ဘေးအစွန်းနှဖက်ကို လှီးချ ပြီးတော့ အနေတော်တုံး။ အုန်းဆီ စစ်စစ်ကို မီးဖိုပေါ်တင် ပူလာရင် စောစောကတုံးထားတဲ့ ရှားစောင်း တုံးတွေထည့်။ ပြီးရင်မွှေ အရောင် ပြောင်းလာရင် ဇကာနဲ့စစ် ဆီပဲယူထား။ ကြက်သွန်နီကို ထောင်း ဒါမှမဟုတ် blender နဲ့ကြိတ် ရေစစ်အသေးနဲ့စစ် ညှစ်ချ အရည်ပဲယူ။ ပြီးရင် စောစောကဆီထဲ ကြက်သွန်နီ အရည်ထည့်။ ပြီးရင် ဦးရေပြားကို နှိပ်ပြီး ရွှဲရွှဲလိမ်းပေး ခနထုံးထား။ မိနစ် ၂၀ လောက်နေရင် … Read more
Categories Beauty Tags နှစ်ခွ
သောကများကင်းဝေးစေရန်ယတြာ စီးပွားရေး၊ငွေကြေးကိစ္စ၊လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်ရာ အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက် ကိစ္စများ၊ ကျန်းမာရေးပြသနာများ စသည့် မည်သည့်ကိစ္စများအတွက်မဆို စိတ်သောကအမျိုးမျိုး ရောက်နေကြသည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြမည့် ယတြာအတိုင်း တိကျသေချာစွာဖြင့် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်နေပါက စိတ်ချမ်းသာလာပါလိမ့်မည်။ “မသိသူကျော်သွား၊သိသူယူထားကြပါ။” ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်တွင် သကြား အပြည့်နီးပါးထည့်ထားသော ဖန်ခွက်အသေးတစ်လုံးတင်ထားရပါမည်။ ထိုသကြားထည့်ထားသောဖန်ခွက်အဝတွင် ကြက်သွန်နီ အလုံးကြီးကြီး ၁လုံး တင်ပြီး ထိုကြက်သွန်နီပေါ် အမွှေးတိုင် နှစ်တိုင်စီစိုက်၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ထွန်းညှိပူဇော်ပေးရပါတယ်။ ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးဂါထာကို (၉)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီး မိမိလိုရာကို ဆုတောင်းပါ။ နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာပညာရှင် ဆရာသိန်းထူး Ph-09259865571 Ph-09797751889 Zawgyi ေသာကမ်ားကင္းေဝးေစရန္ယၾတာ စီးပြားေရး၊ေငြေၾကးကိစၥ၊လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ရာ အတိုက္အခိုက္ အေႏွာင့္အယွက္ ကိစၥမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ား စသည့္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္မဆို စိတ္ေသာကအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ေနၾကသည္ဆိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပမည့္ ယၾတာအတိုင္း တိက်ေသခ်ာစြာျဖင့္ ယုံၾကည္စြာလုပ္ေဆာင္ေနပါက စိတ္ခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မည္။ “မသိသူေက်ာ္သြား၊သိသူယူထားၾကပါ။” … Read more
Categories Horoscropes Tags သောကမျာ
ရှေ့ကယာဥ်ကို ညာဘက်ကနေလည်း ကျော်တက်လို့ရတယ်ဆိုတာသိပါသလား ကျွန်တော်တို့တွေ မိမိရှေ့ကယာဥ်တွေကိုကျော်တက်ကြတဲ့နေရာမှာ သာမန်အားဖြင့် ဘယ်ဘက်(လက်ဝဲဘက်)ကနေပဲ ကျော်တက်ကြရမယ်လို့အများသိထားကြပါတယ် အဲ့ ညာဘက်(လက်ဝဲဘက်)ကတော့ ကျော်တက်လို့မရဘူးရယ်လို့ပေါ့။ မှန်ပါတယ် မိမိရှေ့ကယာဥ်ကို ကျော်တက်မယ်ဆိုရင် သာမန်အားဖြင့် ဘယ်ဘက်(လက်ဝဲဘက်)ကပဲ ကျော်တက်ရပါ့မယ် သို့သော် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ညာဘက်(လက်ဝဲဘက်)ကနေ ကျော်တက်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါတွေကတော့- ၁။ ရှေ့ကယာဉ်ဟာ လက်ဝဲဘက်(ဘယ်ဘက်)ကို ကွေ့ဖို့အချက်ပြနေတဲ့အခါ၊ ၂။ လမ်းမှာ ယာဉ်တွေပိတ်နေလို့ လက်ယာဘက်(ညာဘက်)မှာပဲ လမ်းပွင့်နေတဲ့အခါ၊ ၃။ ယာဉ်ကြောပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ လက်ဝဲဘက် (ဘယ်ဘက်)ယာဉ်ကြောမှာမောင်းနေတဲ့ယာဉ်ရဲ့ ရှေ့သို့ လက်ယာဘက်(ညာဘက်)ယာဉ်ကြောမှ လမ်းပြောင်းဝင်တဲ့အခါ၊ ၄။ တစ်လမ်းမောင်းမှာ မောင်းနှင်သွားလာတဲ့အခါ။ ကဲ အဲ့အချက်(၄)ချက်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ လက်ဝဲဘက်(ညာဘက်)ကနေလည်း ကျော်တက်လို့ရပါပြီဗျာ အဲ့ မျဉ်းသေတို့ မလွတ်တလွတ်ကျော်တက်တာတို့ လုတက်တာတို့တော့ ကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော်ကိုခင်ကြတဲ့ယာဉ်မောင်းတွေမို့ အဲ့ဒီလို‌တော့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့။ ဒုရဲအုပ်ဌေးလွင်(ခ)နေမျိုးသူရ Zawgyi ေရွ႕ကယာဥ္ကို … Read more
Categories Careers Tags ရှေ့ကယာဥ်